ကိုယျစောငျ့နတျက တကယျစောငျ့ရှောကျပါသလား - Latest Myanmar News
February 13, 2021 by Latest Myanmar News
လူတိုငျးသိထားသငျ့သညျ့ ကိုယျစောငျ့နတျ အကွောငျးနှငျ့ လူကို ကိုယျစောငျ့နတျ စောငျ့ရှောကျပုံအကွောငျး
ဦးဇငျးဘုရား ကိုယျစောငျ့နတျဆိုတာ တကယျရှိပါသလား ဘုရား?
လူကို နတျကစောငျ့တယျဆိုတာ ဗုဒ်ဓဘာသာနဲ့ ကိုကျညီမှုရှိပါသလား?
တကယျလို့ ကိုယျစောငျ့နတျဆိုတာရှိခဲ့ရငျ ဘယျလိုမြိုးပုံစံနဲ့ လူကို စောငျ့ရှောကျပေးပါသလဲ?
သူဟာ လူ့ခန်ဓာကိုယျထဲမှာ နတောပါလား ပွငျပမှာ သီးခွားနတောပါလားဆိုတာကို ဘုရားတပညျ့တျောကိုသနားစောငျ့ရှောကျ
မေးခှနျးတှကေ မြားလိုကျတာ။ ဦးဇငျး ခပျတိုတိုနဲ့ လိုရငျးပဲ ဖွပေေးလိုကျပါတယျ။ကိုယျစောငျ့နတျဆိုတာ တကယျရှိပါတယျ။
“မကောငျးမှုပွုသော သူသညျ သူမကောငျးမှုပွုတဲ့ အကွောငျးကို သူကိုယျတိုငျ ပဌမဦးစှာ သိ၏။ ထို့နောကျ သူ၏ ကိုယျစောငျ့နတျသိ၏။
ထို့နောကျ သူတဈပါး၏ စိတျကို ဖောကျထှငျးပွီး သိနိုငျတဲ့ တနျခိုးရှငျမြားသိကွ၏”လို့ ပါရာဇိကဏျအဋ်ဌကထာ သုဒိန်ဒကဏ်ဍအဖှငျ့မှာပါတဲ့ ဒီစကားရပျကို ထောကျပွီးတော့ ကိုယျစောငျ့နတျ တကယျရှိတယျဆိုတာ သိရပါတယျ။
ဒီစကားရပျကိုထောကျပွီးတော့ လူကို နတျစောငျ့တယျဆိုတာ ဗုဒ်ဓဘာသာနဲ့လညျး ကိုကျညီမှုရှိပါတယျ။
အခွားသော အထောကျအထား ကမျြးကိုးကမျြးကားထုတျပွစရာတှေ အမြားကွီးရှိပမေယျ့ သိသာရုံမြှ ဒီလောကျနဲ့ပဲ ကနြေပျတျောမူကွပါ။
နောကျမေးခှနျးတဈခုက လူကို ဘယျလိုမြိုးစောငျ့ရှောကျသလဲဆိုတာနျော။
ဘုနျးကံကွီးမားတဲ့ လူကို တနျခိုးကွီးမားတဲ့ စိတျဓာတျအငျအား ခိုငျမာတောငျ့တငျးမှုရှိတဲ့ သူတျောကောငျး နတျမြားက စောငျ့ရှောကျပါတယျ။
ဘုနျးကံမှဲမှဲလူမြားကိုတော့ တနျခိုးသေးနုပျတဲ့ စိတျဓာတျအငျအား ခိုငျမာတောငျ့တငျးမှုမရှိတဲ့ နတျသေးနတျမှားလေးတှကေ စောငျ့ရှောကျပါတယျ။
တနျခိုးအာနုဘျောကွီးမားလေ လုပျနိုငျတဲ့အရာတှေ လုပျပိုငျခှငျ့တှေ ပိုရှိလမေို့ သူလုပျနိုငျတဲ့ ပမာဏ သူလုပျပိုငျခှငျ့ရှိတဲ့ အတိုငျးအတာထဲကနေ ကူညီစောငျ့ရှောကျပေးပါတယျ။
ဗာရာဏသီမငျးဟာ ကောသလမငျးကိုသတျပွီးတော့ တိုငျးပွညျကိုသိမျးပိုကျပွီးတော့ ကောသလမငျးရဲ့ မိဖုရားကွီးကိုတော့ သူရဲ့ မိဖုရားကွီးအဖွဈ ဗာရာဏသီမငျးက သိမျးပိုကျခဲ့တယျ။
အဲဒီ မိဖုရားကွီးမှာ သှားလသေူ ကောသလမငျးနဲ့ ရထားတဲ့ ကိုယျဝနျကနျြနခေဲ့တယျ။ အခြိနျတနျတော့ သားယောကြာင်ျးလေးမှေးဖှားခဲ့တယျ။
အရှယျရောကျတော့ ဗာရာဏသီမငျး အခွားမိဖုရားနဲ့ ရထားတဲ့ ကုရုင်ျဂဒဝေီဆိုတဲ့ မငျးသမီလေးနဲ့ ခဈြကွိုကျသှားကွပါတယျ။
ဗာရာဏသီမငျးကွီးကသိလို့ မငျးသာလေးကို သတျဖို့လုပျတယျ။ မငျးသားလေးကို သဘေေးကနေ လှတျအောငျ ကယျတငျပေးခဲ့တယျ။
ကယျတငျပေးသူကတော့ မငျးသားလေးရဲ့ ကိုယျစောငျ့နတျပဲဖွဈတယျ။ (မဟာဏုဏာလဇာတက)
ဒါကွောငျ့ သူလုပျပိုငျခှငျ့ရှိတဲ့ ပမာဏ သူလုပျပေးနိုငျတဲ့ ပမာဏအားလြျောစှာ စောငျ့ရှောကျပေးတယျလို့ မှတျသားစခေငျြပါတယျ။
နောကျမေးခှနျးတဈခုက လူ့ခန်ဓာကိုယျထဲမှာ နတောလားအပွငျဘကျမှာနတောလားဆိုတာနျော.။
အပွငျဘကျမှာနပေါတယျ။ ကိုယျစောငျ့နတျဆိုတာ ကိုယျပတျဝနျးကငျြမှာရှိနတေဲ့ ဘုမ်မစိုး ရုက်ခစိုးစတဲ့ နတျတှပေါ။
လူ့ခန်ဓာကိုယျထဲမှာ နတျရှိရငျ အဲဒီလူကို မွနျမာလူမြိုးတှကေ စုနျးလို့ သတျမှတျကွပါတယျ။ အဲဒီအကွောငျးကို ဦးဇငျး သီးခွားပို့ဈတဈခုတငျပွီးတော့ ရှငျးပွပေးမယျနျော။ အခုတော့ ပို့ဈသိပျရှညျသှားမှာမို့ ရှငျးမပွတော့ပါဘူး။
သူ့မေးခှနျးက ဒီလောကျဆိုရငျ ပွီးသှားပါပွီနျော။
ဒါပမေယျ့ မေးခှနျးမှာ မပါလို့ အမြားသိသငျ့သိထိုကျတယျထငျလို့ အကွောငျးအရာတဈခုကို ဦးဇငျးဘာသာမေးပွီးတော့ ဦးဇငျးဘာသာပဲ ဖွပေေးလိုကျပါတယျ။
လူတိုငျးမှာ ကိုယျစောငျ့နတျရှိပါသလား..။လူတိုငျးမှာ သဘာဝအားဖွငျ့ ကိုယျစောငျ့နတျရှိပါတယျ။
ဘုနျးကံမှဲမှဲလူမြားကိုတော့ တနျခိုးသေးနုပျတဲ့ စိတျဓာတျအငျအား ခိုငျမာတောငျ့တငျးမှုမရှိတဲ့ နတျသေးနတျမှားလေးတှကေ စောငျ့ရှောကျပါတယျ။လို့ အထကျမှာလဲ ဦးဇငျးပွောခဲ့တယျနျော။
ကိုယျစောငျ့နတျတှဆေိုတာ လူစောငျ့ရှောကျတဲ့ လူရဲ့ အလိုကိုလိုကျပွီးတော့ ပွောငျးလဲတတျကွပါတယျ။ မြားသောအားဖွငျ့ ဒီလိုမြိုး လူ့ရဲ့အလိုကိုလိုကျပွီးတော့ ပွောငျးလဲတတျတာဟာ တနျခိုးသေးနုပျပွီးတော့ စိတျဓာတျအငျအား ခိုငျမာတောငျ့တငျးမှုမရှိတဲ့ ကိုယျစောငျ့နတျတှပေေါ့။ ဒီလို နတျတှကေတော့ သူစောငျ့လြှောကျတဲ့လူက ကောငျးရငျ သူကကောငျးပွီးတော့ လူကဆိုးရငျ သူလဲဆိုးသှားတတျပါတယျ။
တနျခိုးကွီးမားတဲ့ စိတျဓာတျအငျအား ခိုငျမာတောငျ့တငျးတဲ့ ကိုယျစောငျ့နတျမြားကတော့ သူတို့မကွိုကျတာကို လုပျရငျ အဲဒီလူကို စှနျ့ပဈပွီးတော့ ထှကျသှားတတျကွပါတယျ။လူပွောငျးလဲတိုငျး သူတို့က လိုကျပွီးတော့ မပွောငျးလဲကွပါဘူး။
ဥပမာအားဖွငျ့ စတေီယမငျးရဲ့ အဖွဈအပကျြကိုကွညျ့ပါ။
စတေီယမငျးဟာ တနျခိုးကွီးမားတဲ့ နတျသားလေးယောကျက စောငျ့ရှောကျပါတယျ။ စတေီယမငျး မုသားစကားပွောတော့ နတျသားလေးယောကျဟာ စတေီယမငျးကို တဈခါထဲ စှနျ့ပဈထှကျခှါသှားခဲ့ကွပါတယျ။ (စတေီယဇာတက)
ဒါကွောငျ့ လူတိုငျးမှာ သဘာဝအားဖွငျ့တော့ ကိုယျစောငျ့နတျရှိကွပါတယျ။ သို့သျော အခြို့သူမြားကတော့ ကိုယျစောငျ့နတျမကွိုကျတာလုပျလို့ ကိုယျစောငျ့နတျရဲ့ စှနျ့ပဈခွငျးကို ခံကွရလို့ ကိုယျစောငျ့နတျ မရှိတာမြိုးတှလေဲ ရှိပါတယျ။
( မိုးသု- မန်တလေး)
လူတိုင်းသိထားသင့်သည့် ကိုယ်စောင့်နတ် အကြောင်းနှင့် လူကို ကိုယ်စောင့်နတ် စောင့်ရှောက်ပုံအကြောင်း
ဦးဇင်းဘုရား ကိုယ်စောင့်နတ်ဆိုတာ တကယ်ရှိပါသလား ဘုရား?
လူကို နတ်ကစောင့်တယ်ဆိုတာ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိပါသလား?
တကယ်လို့ ကိုယ်စောင့်နတ်ဆိုတာရှိခဲ့ရင် ဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့ လူကို စောင့်ရှောက်ပေးပါသလဲ?
မေးခွန်းတွေက များလိုက်တာ။ ဦးဇင်း ခပ်တိုတိုနဲ့ လိုရင်းပဲ ဖြေပေးလိုက်ပါတယ်။ကိုယ်စောင့်နတ်ဆိုတာ တကယ်ရှိပါတယ်။
“မကောင်းမှုပြုသော သူသည် သူမကောင်းမှုပြုတဲ့ အကြောင်းကို သူကိုယ်တိုင် ပဌမဦးစွာ သိ၏။ ထို့နောက် သူ၏ ကိုယ်စောင့်နတ်သိ၏။
ထို့နောက် သူတစ်ပါး၏ စိတ်ကို ဖောက်ထွင်းပြီး သိနိုင်တဲ့ တန်ခိုးရှင်များသိကြ၏”လို့ ပါရာဇိကဏ်အဋ္ဌကထာ သုဒိန္ဒကဏ္ဍအဖွင့်မှာပါတဲ့ ဒီစကားရပ်ကို ထောက်ပြီးတော့ ကိုယ်စောင့်နတ် တကယ်ရှိတယ်ဆိုတာ သိရပါတယ်။
ဒီစကားရပ်ကိုထောက်ပြီးတော့ လူကို နတ်စောင့်တယ်ဆိုတာ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့လည်း ကိုက်ညီမှုရှိပါတယ်။
အခြားသော အထောက်အထား ကျမ်းကိုးကျမ်းကားထုတ်ပြစရာတွေ အများကြီးရှိပေမယ့် သိသာရုံမျှ ဒီလောက်နဲ့ပဲ ကျေနပ်တော်မူကြပါ။
ဘုန်းကံကြီးမားတဲ့ လူကို တန်ခိုးကြီးမားတဲ့ စိတ်ဓာတ်အင်အား ခိုင်မာတောင့်တင်းမှုရှိတဲ့ သူတော်ကောင်း နတ်များက စောင့်ရှောက်ပါတယ်။
ဘုန်းကံမွဲမွဲလူများကိုတော့ တန်ခိုးသေးနုပ်တဲ့ စိတ်ဓာတ်အင်အား ခိုင်မာတောင့်တင်းမှုမရှိတဲ့ နတ်သေးနတ်မွှားလေးတွေက စောင့်ရှောက်ပါတယ်။
တန်ခိုးအာနုဘော်ကြီးမားလေ လုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ပိုရှိလေမို့ သူလုပ်နိုင်တဲ့ ပမာဏ သူလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ အတိုင်းအတာထဲကနေ ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးပါတယ်။
ဗာရာဏသီမင်းဟာ ကောသလမင်းကိုသတ်ပြီးတော့ တိုင်းပြည်ကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတော့ ကောသလမင်းရဲ့ မိဖုရားကြီးကိုတော့ သူရဲ့ မိဖုရားကြီးအဖြစ် ဗာရာဏသီမင်းက သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်။
အဲဒီ မိဖုရားကြီးမှာ သွားလေသူ ကောသလမင်းနဲ့ ရထားတဲ့ ကိုယ်ဝန်ကျန်နေခဲ့တယ်။ အချိန်တန်တော့ သားယောကျာင်္းလေးမွေးဖွားခဲ့တယ်။
အရွယ်ရောက်တော့ ဗာရာဏသီမင်း အခြားမိဖုရားနဲ့ ရထားတဲ့ ကုရုင်္ဂဒေဝီဆိုတဲ့ မင်းသမီလေးနဲ့ ချစ်ကြိုက်သွားကြပါတယ်။
ဗာရာဏသီမင်းကြီးကသိလို့ မင်းသာလေးကို သတ်ဖို့လုပ်တယ်။ မင်းသားလေးကို သေဘေးကနေ လွတ်အောင် ကယ်တင်ပေးခဲ့တယ်။
ကယ်တင်ပေးသူကတော့ မင်းသားလေးရဲ့ ကိုယ်စောင့်နတ်ပဲဖြစ်တယ်။ (မဟာဏုဏာလဇာတက)
ဒါကြောင့် သူလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ ပမာဏ သူလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ပမာဏအားလျော်စွာ စောင့်ရှောက်ပေးတယ်လို့ မှတ်သားစေချင်ပါတယ်။
နောက်မေးခွန်းတစ်ခုက လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ နေတာလားအပြင်ဘက်မှာနေတာလားဆိုတာနော်.။
အပြင်ဘက်မှာနေပါတယ်။ ကိုယ်စောင့်နတ်ဆိုတာ ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ ဘုမ္မစိုး ရုက္ခစိုးစတဲ့ နတ်တွေပါ။
လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ နတ်ရှိရင် အဲဒီလူကို မြန်မာလူမျိုးတွေက စုန်းလို့ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီအကြောင်းကို ဦးဇင်း သီးခြားပို့စ်တစ်ခုတင်ပြီးတော့ ရှင်းပြပေးမယ်နော်။ အခုတော့ ပို့စ်သိပ်ရှည်သွားမှာမို့ ရှင်းမပြတော့ပါဘူး။
သူ့မေးခွန်းက ဒီလောက်ဆိုရင် ပြီးသွားပါပြီနော်။
ဒါပေမယ့် မေးခွန်းမှာ မပါလို့ အများသိသင့်သိထိုက်တယ်ထင်လို့ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို ဦးဇင်းဘာသာမေးပြီးတော့ ဦးဇင်းဘာသာပဲ ဖြေပေးလိုက်ပါတယ်။
လူတိုင်းမှာ ကိုယ်စောင့်နတ်ရှိပါသလား..။လူတိုင်းမှာ သဘာဝအားဖြင့် ကိုယ်စောင့်နတ်ရှိပါတယ်။
ဘုန်းကံမွဲမွဲလူများကိုတော့ တန်ခိုးသေးနုပ်တဲ့ စိတ်ဓာတ်အင်အား ခိုင်မာတောင့်တင်းမှုမရှိတဲ့ နတ်သေးနတ်မွှားလေးတွေက စောင့်ရှောက်ပါတယ်။လို့ အထက်မှာလဲ ဦးဇင်းပြောခဲ့တယ်နော်။
ကိုယ်စောင့်နတ်တွေဆိုတာ လူစောင့်ရှောက်တဲ့ လူရဲ့ အလိုကိုလိုက်ပြီးတော့ ပြောင်းလဲတတ်ကြပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ဒီလိုမျိုး လူ့ရဲ့အလိုကိုလိုက်ပြီးတော့ ပြောင်းလဲတတ်တာဟာ တန်ခိုးသေးနုပ်ပြီးတော့ စိတ်ဓာတ်အင်အား ခိုင်မာတောင့်တင်းမှုမရှိတဲ့ ကိုယ်စောင့်နတ်တွေပေါ့။ ဒီလို နတ်တွေကတော့ သူစောင့်လျှောက်တဲ့လူက ကောင်းရင် သူကကောင်းပြီးတော့ လူကဆိုးရင် သူလဲဆိုးသွားတတ်ပါတယ်။
တန်ခိုးကြီးမားတဲ့ စိတ်ဓာတ်အင်အား ခိုင်မာတောင့်တင်းတဲ့ ကိုယ်စောင့်နတ်များကတော့ သူတို့မကြိုက်တာကို လုပ်ရင် အဲဒီလူကို စွန့်ပစ်ပြီးတော့ ထွက်သွားတတ်ကြပါတယ်။လူပြောင်းလဲတိုင်း သူတို့က လိုက်ပြီးတော့ မပြောင်းလဲကြပါဘူး။
ဥပမာအားဖြင့် စေတီယမင်းရဲ့ အဖြစ်အပျက်ကိုကြည့်ပါ။
စေတီယမင်းဟာ တန်ခိုးကြီးမားတဲ့ နတ်သားလေးယောက်က စောင့်ရှောက်ပါတယ်။ စေတီယမင်း မုသားစကားပြောတော့ နတ်သားလေးယောက်ဟာ စေတီယမင်းကို တစ်ခါထဲ စွန့်ပစ်ထွက်ခွါသွားခဲ့ကြပါတယ်။ (စေတီယဇာတက)
ဒါကြောင့် လူတိုင်းမှာ သဘာဝအားဖြင့်တော့ ကိုယ်စောင့်နတ်ရှိကြပါတယ်။ သို့သော် အချို့သူများကတော့ ကိုယ်စောင့်နတ်မကြိုက်တာလုပ်လို့ ကိုယ်စောင့်နတ်ရဲ့ စွန့်ပစ်ခြင်းကို ခံကြရလို့ ကိုယ်စောင့်နတ် မရှိတာမျိုးတွေလဲ ရှိပါတယ်။
( မိုးသု- မန္တလေး)